အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်ရဲ့ အတွေးတစ်ချို့
25 Responses to “အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်ရဲ့ အတွေးတစ်ချို့”
စာအုပ်တွေဖတ်တာ၊ စာရေးတာကတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အကြိုက်ခြင်းတူပါ့ဗျားးးးးးးး
(အသစ်တွေ့လို့ပြေးလာတယ်....။ တက်ဂ်နဲ့ တိုးနေပေတော့သကိုးးးးးး....၊ ရေးပေးပါ့မည်။ မကြာမီလာမည် မျှော်..... ဟော်...ဟော်......း))
ချောစာရေးတဲ့ သက်တမ်းက ၃လပေမယ့် ချောရေးသမျှပို့စ်လေးတွေဟာ စာဖတ်သူတွေရော မိတ်ဆွေ ဘလော့ဂ်ဂါများကိုပါ ကောင်းမွန်တဲ့ တစ်စုံတစ်ရာတွေ အကြိမ်ကြိမ်ပေးခဲ့တာတော့ အသေအချာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ခင်မင်ဘို့ကောင်းတဲ့ ချော၊ ကူညီမှုတွေပေးတတ်တဲ့ချော ၊ စာကောင်းပေမွန်တွေကို ဒီထက်မက အများကြီး ဆက်ရေးသားသွားနိုင်ပါစေလို့ ၃လပြည့်မှာ ဆုမွန်ချွေလိုက်ပါတယ် ။
Tag ထားတာလေးကိုတော့ ကိုဏီပြောသလို မျှော်..... :P
I like ur posts so much and I will support u to carry on the good job.
But, TAKE CARE UR HEALTH FIRST.
ကိုဏီလင်းပြောသလိုပဲ ပိုစ့်အသစ်တွေ့လို့ပြေးလာတာ တက်ဂ်နဲ့တွေ့သွားတယ်။ အမှတ်တရ တက်ဂ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ လာပါမယ်။ မချောရဲ့ဘလော့လည်း(၃)လပြည့်မှ နောက်....နောက်..(...)နှစ်တွေအထိစာပေဝေမျှနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။စာအရေးအသားကောင်းမွန်တဲ့
စာတွေကလည်း ရှင်းသန့်လို့ အမြဲရောက်ဖြစ်တယ်၊
သုံးလပဲရှိသေးတယ်ဆိုပေမယ့် စာရေးသူရဲ့ စေတနာက ပေါ်လွင်နေပါတယ်။
၃ လအတွင်း မှာ မှတ်ထားစရာ ကောင်းတဲ့ မှတ်သားစရာ တွေ အများကြီး ပေးခဲ့နိုင်တာ လေးစား
ရှေ့လာမယ့် ရက်ပေါင်း လပေါင်း နှစ်ပေါင်း များစွာမှာ လည်း စာပေစွမ်းနဲ့ အများအကျိုးကို ဆထက်
Tag လိုက်တာလား...ဟိုးမနှစ်က Tag ကြွေးတွေတောင် ကောင်းကောင်းမကြေလို့ ဘော်ဒါတစ်ဘွေ
စိတ်ကောက်နေလေရဲ့....အလုပ်တွေရှုပ်ရင်း အရှုပ်တွေလုပ် နေရသူမို့ ...နည်းနည်းသည်းခံပါလို့
သုံးလ ပြည့်အမှတ်တရ ဖတ်သွားပါတယ်
အဲ...အပေါ်မှာကျန်ခဲ့လို့ ...ရေးပေးမယ်နော်..နောင်ခါပေး တွေ့တိုင်းတောင်းပေါ့...ဟီးးးးးးးးးး
မမ...၃လပြည့်သွားခဲ့ပြီလား...မမရဲ့စာတွေက ဘယ်တုန်းကမှ အဆိပ်အတောက် မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး...မမရေးထားတဲ့ စာတွေမှာ မမရဲ့ စေတနာတွေက အထင်းသားပေါ်လွင်နေတာပဲ...စေတနာကောင်းသလို စိတ်ထားလည်းကောင်းတဲ့ ငါ့အစ်မ (ညီမလေး ဆိုးချင်တိုင်းဆိုးလို့ရတယ်လေ...) ဒီ့ထက်မက အကျိုးပြုစာတွေရေးနိုင်ပြီး ဒီ့ထက်မကလည်း အောင်မြင်မှုတွေရပါစေ...
သုံးလပြည့်မှသည် ထာဝရဆီသို့ စာကောင်း စာမွန်တွေ ရေးနိုင်ပါစေဗျာ။
“ရင်ထဲက အတွေးစများ” ဆိုတော့လည်း ကျနော် ရင်ထဲက အတွေးတစ်ခုကို တကယ် ဖော်ပြီး ရေးပါ့မယ်။ ဟိုးငယ်စဉ်ကတည်းက အခုထိ ရင်ထဲမှာ ပြင်းပြင်းပြပြ တည်နေတဲ့ အတွေးတစ်ခုပေါ့ဗျာ။ အမြန်ဆုံးရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။
မ နဲ့သမီးနဲ့တူတယ် မ ရေ သမီးလဲ စာအုပ်တွေ သိပ်ဖတ်တာ သမီး စ ဖတ်ဖြစ်တာ တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်ရဲ့ သူငယ်ချင်းလို့ဆက်၍ခေါ်မည် ခိုင် ဖတ်ဖြစ်တာ မ ရဲ့အရမ်းသနားတာပဲ မ ရယ်
ဘလော့သုံးနှစ်ပြည့်မှသည် အခုလို အများအကျိုးပြုစာပေတွေကို များများရေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ရေးတာ သုံးလထဲရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ ဘလော့ဂ်ပေါ်ရောက်တာ တစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကျနော့်ထက်တော့ အဆပေါင်းများစွာ အမကသာလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လဲ မအားတဲ့ကြားထဲက အသစ်တင်တာတွေ့ရင် အပြေးလာဖတ်ဖြစ်တာပါ။
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနိုင်ပါစေ အမ။ တဂ်ထားတာကိုတော့ အချိန်ရတဲ့အခါ ရေးပေးမယ်နော်။ နောက်ကျရင် ခွင့်လွတ်စေချင်ပါတယ်။
မယ်ချောတို့ ၃လ ပြည့်ပြီဆိုတော့...ချိုမိုင်မိုင်ကတတ်ပြီပေါ့
၃လ သမီးလေးက စကားလည်း အလွန်တတ်၊ စာလည်း အလွန် အရေးကောင်းတာမို့ ဘလော့ဂ်လေးက လူလားမြောက်တာ အလွန်မြန်တယ်လို့ပဲ ပြောပါရစေတော့...
ရေးပေးမယ်ချောရေ...မနက်ဖြန် တင်လိုက်မယ်၊ တို့က အဲသလို စိတ်ကြီးတယ်...:)
မချောရေ......လာဖတ်သွားပြီ။ရေးပေးမယ်နော်။နည်းနည်းနောက်ကျရင် ဆောရီးလို့ ကြိုတောင်းပန်ထားမယ်နော်။
ချောရေ........ အလိမ္မာ စာမှရှိဆိုတဲ့ စကားလေးအတိုင်း ကိုယ်ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေရယ် စာပေတွေထဲက ရရှိခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတတွေရယ်ကို စာဖတ်သူ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် မျှဝေပေးချင်တဲ့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချင်လေးကို လေးစားမိပါတယ်။ (၃)လ ဆိုတဲ့ သက်တမ်းနဲ့ မထင်ရလောက်အောင်ကို စာဖတ်သူတွေအတွက် စေတနာ ထားတဲ့ ဘလော့သက်တမ်း (၃) လပြည့်မှစပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ အောင်မြင်စွာ ရေးသားနိုင်ပါစေနော်။
Tag ပိုစ့်လေးကိုလည်း ရေးပေးမယ်နော်။ အတူတူ မျှဝေကြတာပေ့ါ ချောရယ်။
အမရေ ဒီထက်ပိုပြီး အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ သတိတရနဲ့ တက်ဂ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ မကြာမီ လာမည်တော့ မဟုတ်ဘူးနော် ကြာမည် လာမည်ပေါ့ အမရယ် အလုပ်နဲနဲများနေလို့ပါ :P
ကျနော်ကတော့myanmar blog တွေကိုအမြဲဖတ်ဖြစ်တဲ့...တယောက်ပါ
ပထမဆုံး ပြောချင်တာကတော့ စေတနာပါပါ ရေးတတ်လို့ ဒီ့ထက် အများကြီး အောင်မြင်အုံးမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်နေတယ်။
ဒုတိယပြောချင်တာက ၃ လ ပြည့်မှသည် ၃ နှစ်တိုင်အောင် ရေးနိင်ပါစေ
တတိယ ပြောချင်တာက တဂ်ပို့စ်ကတော့ လာမယ် အဲကြာရင်လည်း ကြာနိင်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ။
ချောရေ -- အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်ရဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်လေးတွေကို ဖတ်သွားပါတယ်။ မမြင်ဖူးပေမယ့် Tag လို့ ရေးပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေး ဖော် ရေး ဖက်တွေ ဖြစ်ရတာတော့ ပျော်ပါတယ်။
သုံးလမှသည် --- နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် အကျိုးပြုစာပေများစွာကို ရေးသားနိုင်ပါစေ ----
အစ်မ ရေးတဲ့ စာတွေက ဖတ်လို့ တကယ်အကျိုးရှိစေတာပါ
အတွေးတစ်ချို့ လာဖတ်သွားပါတယ်။ စာအုပ်တွေတန်ဖိုးထားတယ်၊ စာဖတ်တာ၊စာရေးတာကို ၀ါသနာပါတာ သိရလို့ ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ဘလော့ဂါအားလုံးက ၀ါသနာပါလို့ချည်းပါပဲလေ။